I ekuvalweni kwenhlangano - ayeke ukusebenza kwe inhlangano engokomthetho ngaphandle ukudluliswa kwamandla abazolandela esikhundleni. Inkampani kufanele ayifakiwe Register State. TIN futhi BIN kufanele ukhansele, kuphela kuleli cala, ifemu uzobe ngokusemthethweni iqedwe.
Kangakanani nokuqedwa ukulibona kwezentengiselwano?
Lo mcimbi kungenzeka kuphela ngokususa isinqumo kwabanikazi bamasheya noma abanikazi (ngokuzithandela), umzimba ogunyaziwe noma isinqumo inkantolo (ngenkani).
Ukumiswa izinkampani commercial oluphethwe algorithm elandelayo:
1. masheya uyothatha isinqumo on ekunqanyulweni imisebenzi. Bona liqoke liquidator noma ikomiti ekhethekile. Ngemva kwalokho Manager ibona okungagunyaziwe.
2. Revenue Service wakhonza isaziso sokuthi i-ekuvalweni kwenhlangano wenziwa.
3. abezindaba kufanele ushicilele ulwazi ekunqanyulweni kwe umsebenzi ibhizinisi.
4. Kuyadingeka ukuthi isenzo odlule yayithatha amasonto cishe 8 ukuze ixazululwe nge abakweletwayo, nokukhokhwa kwezintela nezimali kokuthola imali kusuka abakweletayo. kufanele Ngalesi sikhathi unikezwa izitatimende yesikhwama sempesheni futhi ukuthola isitifiketi kungabikhona izimangalo ukuze Pension Fund i ibhizinisi.
5. izingxenye ibhalansi (Lesisemkhatsini nokuqedwa), khona-ke icala komsebenzi wombuso.
6. Okulandelayo, udinga ukufaka isicelo sokuthi kususwe igunya yokubhalisa. Isikhathi ukusebenza - izinsuku 5 emva kuhanjiswa yayo.
I ekuvalweni kwenhlangano ngokuqinisekile ibe nempumelelo futhi ngendlela efanele, uma siphendukela ochwepheshe amafemu umthetho. Uhlu namaphepha adingekayo:
Iphasiphothi yase Inhlangano Umqondisi (ikhophi ekhasini eliyinhloko.);
ikhophi yaleli passport bamasheya (abasunguli) ibhizinisi;
ikhophi yaleli kula irejista;
ikhophi-balance sheet (ngonyaka odlule namaphepha ikota);
ikhophi yesaziso mayelana nezinkampani bhalisiwe e Pension Fund.
Ukuqedwa engenzi-nzuzo amabhizinisi
Uma nokuqedwa izinhlangano ezingenzi nzuzo senzeka ngokuzithandela, okulandelayo kufanele kubhekwe:
1. inkampani uyakukhokha konke izikweletu izimali ze-non-kwesabelomali kanye ibhajethi.
2. Kubalulekile ukuqinisekisa idatha ehhovisi sentela nezimali, ukukhokha inani olahlekile uma kunesidingo.
3. Kufanele siqaphele ukuthi kungenzeka ukuthi iziphathimandla zentela lingaqhuba ukuhlolwa okungavamile. Kungase kungabi uma inkampani ngesikhathi ezinhle nginikeze entela kanye nokukhokha zonke izintela.
4. Lapho ekuvalweni kwenhlangano luphela (ngemva ekukhokheni izimali isimo kanye nezikweletu), uvale i-akhawunti yamanje.
5. PF kumele ahlinzeke izitatimende kanye namanye amadokhumenti siqu ukuze usuku, lapho kwanqunywa ukuba anqamule imisebenzi yenkampani.
Indlela ukuqeda PI?
Ukuqedwa osomabhizinisi yangasese simiswe ngalendlela lelandzelako:
1. PI ukhokha zonke izikweletu futhi isabelomali PF.
2. SP kuthatha inkomba kusukela PF ukuthi alinaso nezikweletu kulesi sikhwama umshwalense impesheni.
3. sekugcwalisiwe ekucwileni ezikweletini IP kuziphathimandla kokubhalisa.
Amaphepha adingekayo ukuze imisebenzi:
SP iphasiphothi (ikhophi ekhasini eliyinhloko.);
ikhophi yaleli EGRYU dokhumenti;
isitifiketi sokubhaliswa njengoba usomabhizinisi ngamunye (ikhophi);
isaziso ukubhalisa ne PF (ikhophi).
Ukwenqatshelwa e-United States futhi okuhlangenwe nakho ukulinganisela ophoqelelwe eU.SSR
OKUBI "Smart Omega". "Smart Omega": yokusetshenziswa, incazelo, ukwakheka kanye nokubuyekeza
Hidden ePharadesi Ihhotela 3 * (North Goa, Ashvem): izithombe kanye nokubuyekeza
Uhlelo lokushintsha isihloko se-Vkontakte